🥇 aza ezé ezé
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 39
Vidiyo nke ndekọ ego nke dọkịta ezé
Denye mkpesa nke dọkịta ezé
A logbook nke dentists ’na-arụ ọrụ aza ajụjụ nwere ike na-akpọ ụdị akwụkwọ na ọ bụla dọkịta ezé ga-enwe iji chịkwaa ihe omume na arụmọrụ nke ndị ọkachamara. Enwere ike ghara ịchịkwa ndekọ ndekọ ego nke dọkịta ezumezu nke ọma, ebe ọ bụ na ọkachamara ahụ nwere ike ọ gaghị anọ n'oge, chefuo ma ọ bụ achọghị ịme nyocha kwa ụbọchị nke ọrụ ya, n'ihi na ọ bụghị ha niile nwere oge, ọchịchọ. E wezụga nke ahụ, ihe ndị ọzọ na-egbochi. N'ụzọ dị mma, e nwere ihe ngwọta maka nsogbu ndị a. Ekele maka azịza a, enwere ike jupụta na ndekọ ego nke ndị dọkịta na-arụ kwa ụbọchị na akpaghị aka. Ma, n’otu oge, nke a ghọrọ usoro iwu nke iwu ịme, na n’otu oge gị na dọkịta gị agaghị egbu oge. Anyị na-ekwu maka usoro pụrụ iche nke na-enye gị ọrụ nke nyocha ezé na-enye gị ohere nyochaa ọrụ nke ọkachamara ọ bụla - nke a bụ USU-Soft accounting software. Ngwa a bụ ihe analogi na kọmputa nke akwụkwọ ndekọ akwụkwọ ntuziaka, nke dọkịta na-abanye na nsonaazụ ọrụ. Ọrụ ndị nwere ikike nwere ike tinye mgbanwe na mmemme nke eze na-aza ajụjụ na, ma, si otú ahụ, aza ajụjụ nke na-arụ ọrụ awa ma ọ bụ nhọpụta nke ndị ọrịa na-systematized na ị nwere ike ịchịkwa ndị ọrụ mgbe niile na enyemaka nke ndị dị otú ahụ a bara uru omume nke dentists ajụjụ. A na-echekwa omume niile edere na mmemme nke dọkịta ezé, ebe onye ọrụ nke mere ntinye na ngwanrọ ahụ, yana oge na ụbọchị gosipụtara.
Dọkịta aza ajụjụ omume na-arụ ọrụ na-akpaghị aka; naanị ikwesiri ịbanye ọrụ ahụ, onye ọrụ ga - emeso onye ahịa ahụ, oge na ụbọchị ọhụhụ. Na-agbakwunye na nke ahụ, ọ bụrụ na ị na-egosi ọnụahịa maka ihe eji eri ihe mgbe ị na-arụ ọrụ, mmemme nke ụlọ ọrụ ezé na-edekọ ndekọ nke ihe ma dee ha n'ụlọ nkwakọba ihe na akpaghị aka. Akụrụngwa nwere ikike ijikọ na telephony, nke na-enye gị nnukwu ọsọ nke ọrụ na ndị ahịa. Tụkwasị na nke ahụ, ngwa USU-Soft nwere ọrụ a ga-ahaziri na ọnọdụ nke ndebiri nke nchoputa, mkpesa na nkọwa ndị ọzọ a na-eji na-enye ndị ahịa ọrụ. Nke a na - enye gị ohere iweta nguzozi na ọrụ na dejupụta faịlụ ndị ahụ. Map nke ezé, nke dị na ngwanrọ ahụ, na-enyere gị aka ịdekọ nsonaazụ nke arụmọrụ ụfọdụ. Tụkwasị na nke a, ị na-egosi ezé ọ bụla ma mee nkọwa maka ndị ọkachamara nwere otu map. Site na enyemaka nke USU-Soft, ị na-akpaghị aka ịdekọ ndekọ ọrụ maka onye ọrụ ọ bụla, ebe ị nwere ike igbochi ohere ịgbanwe na ihichapụ ihe ndekọ, wee si otú a na-achịkwa ndị ọrụ. Akụrụngwa bụ usoro ọhụụ nke dọkịta ezé nke na-enyere gị aka ịkwalite ezé ma weta ọkwa nke mmepe na ebe a na-enwetụbeghị ụdị ya ma nye ọrụ dị mma maka ndị ahịa gị.
'Ndenye aha' akụkọ na-egosiputa data gbasara ọtụtụ nhọpụta dị ugbu a na ndekọ. Nke a na ozi e dere site na usoro ihe omume nke dọkịta ezé ajụjụ kwa ụbọchị n'otu oge. Ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ nke nhọpụta na-emetụta oge ụfọdụ ma ọ bụ ụfọdụ ezumike na ihe omume obodo, ọ na-egosiwanye ileba anya n'omume ahụ maka ogologo oge zuru oke, dịka ọmụmaatụ site na afọ gara aga (na ọnwa yiri nke ugbu a) ugbu a ụbọchị. N'elu okpokoro a, ị ga - ahụ ogologo oge a ga - eburu usoro - ọnụ ọgụgụ nke nhọpụta na dọkịta ọ bụla, yana na brackets ọnụọgụ ndị ọrịa edenyere aha maka nhọpụta ndị a (isi na nleta ugboro ugboro). Ihe osise dị n'okpuru tebụl na-egosi otú ọnọdụ ọrụ ọrụ si agbanwe n'oge. Na nyocha 'Ọnọdụ', ị nwere ike ịhọrọ ndị ọrịa ị nwere mmasị na - 'Nleta Ndị Isi' ma ọ bụ 'Nlegharị ugboro ugboro'. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere nkwalite, ịchọrọ ịmara ma ọ na-arụ ọrụ ma na-adọta ndị ọrịa ọhụụ - tinyezie 'Nleta Nleta' na ọnọdụ (ndị ọrịa mbụ bụ ndị na-enwebeghị oge.)
Ihe ndebiri ndebanye aha ndị edepụtara na-enyere gị aka belata nke ọma oge iji dejupụta ndekọ ndekọ ahụike gị. Tụkwasị na nke ahụ, ịnwe ndebiri na-eme ka ndị dọkịta niile dejupụta ndekọ ndekọ ahụike site na iji otu ndebiri. Iji mee ka ọ dịkwuo mfe mejupụta ndekọ ahụike ahụ, usoro mmemme nke dọkịta ezé na-ahazi ndabara mmekọrịta dị n'etiti 'Diagnosis' na ndebiri ndị ọzọ. Dabere na nchoputa ahọpụtara, usoro nyocha ahụike na-enyocha 'Mkpesa', 'Anamnesis', wdg. You nwere ike idezi mmekọrịta ndị a. Mgbe onye ọrịa bịara na ụlọ dọkịta ezé maka oge mbụ, ozi gbasara ọnọdụ onye ọrịa (mkpesa, nchoputa, eze na ọnụ) nwere ike ịbanye na mmemme nke nyocha eze. Iji mee nke a ịkwesịrị ịmepụta akwụkwọ nyocha mbụ. Inye nduzi banyere onye ọrịa banyere ụgwọ ọgwụgwọ bụ ụzọ isi mee ka onye ọrịa ahụ dịgasị iche iche maka ụgwọ dị iche iche nke na-abịa ogologo oge na / ma ọ bụ ọgwụgwọ dị oke ọnụ. Ọ na - enye dọkịta ohere ịkọ aro banyere usoro ọgwụgwọ, na - akwado ha site na ịgbakọ. Nke a na-enyere gị aka ịrụ ọrụ dị mma na ịgha mkpụrụ nke ọ bụla maka ịdị nwayọ nke ọrụ nke ụlọ dọkịta ezé. E wezụga nke ahụ, nlebara anya na nkọwa zuru ezu iji merie ntụkwasị obi nke ndị ọrịa gị na n'ihi nke a, ha ji n'aka na ịkwanyere ugwu ugwu ị nwere ike inweta site na mmemme USU-Soft tozuru oke nke ezé na njikwa.